ကောလိပ်အင်္ဂလိပ်အတန်းအစားအတွက်ရေးသားထားသော porn နှင့်ပတ်သက်သောစာစီစာကုံး - Your Brain On Porn
post-Porn ယဉ်ကျေးမှု (2012)
ကောလိပ်အင်္ဂလိပ်လူတန်းစားစရာဘို့ကျမ်းစာ၌ရေးထား porn အကြောင်းကိုအက်ဆေး
လောလောဆယ်ကျနော်တို့အနိုင်ရပါတယ်။ အကြောင်းကိုခုနစျပါးဘီလီယံခန့်ကိုဒီအထီးကျန်ရော့ခ်ကျင်လည်ကျက်တဲ့သူရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့တိုင်းသမုဒ္ဒရာကိုကူး, ကြှနျုပျတို့အိမ်ပြန်မခေါ်အဘယျသို့ကနေသဘာဝအရင်းအမြစ်ထုတ်ယူအများဆုံးအနုစိတ်နည်းလမ်းများတီထွင်သောတိုက်ကြီးစည်ပင်ပါတယ်။ ဒါတွေကိုကျနော်တို့ရဲ့အရေးအပါဆုံးထူးခြားသောမွေးရာပါအင်္ဂါရပ်များနှစ်ခုမပါဘဲဖြစ်နိုင်သမျှပါပြီမယ်လို့: ရှင်သန်နှင့်မျိုးပွားခြင်းငှါအလိုရှိဖို့အလိုဆန္ဒ။ မျိုးပွါးအတွက်မဆိုမျိုးစိတ်တိုးနှင့်၎င်း၏လူ့ယဉ်ကျေးမှုအဘို့အလွန်အရေးပါသည်, 2013 အတွက်လူသားများအနိုင်ရနေကြသည်။
လူသားတွေဟာလက်ငင်းနှင့်အခ်ါဆုလာဘ်တစ်ခုတဏှာကြောင့်ရှင်သန်နှင့်လိင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မူလတန်းကျောင်းရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ လူသားမျိုးနွယ်မတော်တဆမှုအားဖြင့်ဤအမှတ်သို့ရောက်ရှိမထားပါဘူး။ ကျနော်တို့စမတ်နေ, ကြှနျုပျတို့လညျးသိတယျ။ ကံမကောင်းစွာပဲကျနော်တို့သိပ်နောက်ကျကျွန်တော်တို့ရဲ့စွမ်းရည်အနည်းငယ်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြပေမည်။
လူ့ဦးနှောက် "လူ့ကိုသင်မျိုးပွားခြင်းနှင့် သို့ဖြစ်. သင်၏မျိုးစိတ်တိုးနိုင်ရန်အတွက်ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်၏အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးကိုရှာဖွေရပေမည်။ " ဟုမဆိုပေမယ့်အစား, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးနှောက်စစ်မှန်တဲ့အကြောင်းပြချက် skip နှင့်အစွန်းရောက်များ၏ခံစားချက်နှင့်အတူလိင်ပေါင်းသင်းနေဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုသွေးဆောင် အပျော်အပါး။ ကံမကောင်းစွာပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးနှောက်ရဲ့ယန္တရားခိုး။ အဘယ်ကြောင့်ပျော်မွေ့ သာ. ကြီးမြတ်ပါလျှင်တစ်ဦးတည်း masturbating တူညီသောထောက်ပံ့ပေးတဲ့အခါအိမ်ထောင်ဖက်ရှာဖွေတာနှစ်ပေါင်းသုံးဖြုန်း? ကျနော်တို့ထူးခြားသောမွေးရာပါကိုယျ့ကိုယျကိုဆက်လက်အပေါ်မှီခိုင့်စနစ် outsmarted ။ ယနေ့ကျွန်တော်တစ်ဦးအဖော်ဘို့လိုအပ်ကြောင်းဖျက်သိမ်းမသာ, ဒါပေမယ့်လည်းပုံမှန်လိင်ထက်အပျော်အပါးလေးလည်းများအတွက်သာလွန်နည်းလမ်းဖန်တီး: မြန်နှုန်းမြင့်အင်တာနက်ကညစ်ညမ်း။
ဒီနေ့ရဲ့ညစ်ညမ်း၏အစောပိုင်းမူလအစောပိုင်း 1950s အတွက် Hugh Hefner ရဲ့ Playboy တှငျးမှ။ Hefner ရဲ့ Playboy မဂ္ဂဇင်း seductive မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ခေတ်သစ်နေ့ရက်ကိုညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ထုံးတမ်းစဉ်လာ setting, အဝတ်လစ်စလစ်အတွင်းအမျိုးသမီးများ စုပေါင်း. featured ။ Playboy ဒီနေ့ရဲ့ညစ်ညမ်းတဲ့အများကြီးပျော့ဗားရှင်းအဖြစ်သာမကဝေါဟာရ, ဒါပေမယ့်ကြောင့်ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်အသက်အရွယ်ကန့်သတ်တာဒီထက်လည်းလက်လှမ်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ယနေ့ porn ဝေး Playboy ကနေဖြစ်ပါတယ်။ ခေတ်မီကွန်ပျူတာနှင့်မြန်နှုန်းမြင့်အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုနှင့်အတူမည်သူမဆိုသူ / သူမ၏ဘိုးဘေးတို့ဟာသူတို့ရဲ့ဘဝသက်တမ်းအတွက်တတျနိုငျသထက်ပိုပြီးအလားအလာအိမ်ထောင်ဖက်ကိုဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းတစ်နေ့လျှင် 24 နာရီကြည့်ရှုဘို့မရရှိနိုင်အခမဲ့ဖြစ်တယ်, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နေ့စဉ် porn sites များပေါ်တွင်အပ်လုဒ်တင်ပြီးမဝေးတော့တဲ့န့်အသတ်အကြောင်းအရာအသုံးပြုသူများအတွက် insatiable အရသာပေးသည်။
မျိုးဆက် Y ကိုအင်္ဂါဖြစ်ကြောင်းကိုအဘယ်သူသည်ငယ်ရွယ်အရွယ်ရောက်အမျိုးသားများအထူးသဖြင့်အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်း၏တိုးပွားလာကြီးစိုးကြောင့်ထိခိုက်နေကြသည်။ မျိုးဆက် Y ကို၏ရို defining တစ်ခုမှာကွန်ပျူတာရရှိနိုင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်တွင်ငယ်စဉ်ကလေးဘဝတစ်လျှောက်လုံးပုဂ္ဂိုလ်ရေးကွန်ပျူတာ၏စဉ်ဆက်မပြတ်ရှိနေခြင်းမှာသဘာဝနှင့်အသိပညာ၏အဓိကအရင်းအမြစ်အဖြစ်ကကြည့်ရှုရန်ဤလူမြိုးကိုအေးစက်လျက်ရှိသည်။ ဘယ်အချိန်မှာဟောင်းနှစ်ပေါင်း 10 မှအထီး 14, အဖြေတွေကိုများအတွက်ကွန်ပျူတာကိုလှည့်သဘာဝဗီဇစေခြင်းငှါမိမိလိင်အကြောင်းကိုနောက်ဆုံးတော့စပ်စုထေူဖြစ်ပါတယ်။ မျိုးဆက် Y ကိုအတော်များများဟာငယ်ရွယ်အထီးအဖွဲ့ဝင်များကအင်တာနက်ညစ်ညမ်း၏လက်ထောက်နှင့်အတူလူငယ်တစ်ဦးသည်အသက်ထံမှ masturbating စတင်ခဲ့ပြီးနှောင်းပိုင်း 20s ၎င်းတို့၏အစောပိုင်းသို့ရက်နေ့တွင်ဆက်လက်ပါပြီ။
အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းအကဲခတ်အဆိုပါ Coolidge Effect ဖို့တစ်ခုတည်းကိုသာကြောင့်အင်တာနက်ပေါ်ရှိလူကြိုက်အများဆုံးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ Coolidge Effect ကြွက်များနှင့်သုတ်ရည်လွှတ်ရောက်ရှိဖို့ခေါ်ဆောင်သွားအချိန်ကိုအကြားမိတ်လိုက်ပုံစံများနှိုင်းယှဉ်လေ့လာမှုတစ်ခုကနေဆင်းသက်လာခဲ့သည်။
တစ်ဦးကြွက်မျိုးစုံမိတ်ဖက်နှင့်အတူ mated အခါ, သုတ်ရည်လွှတ်တိုင်အောင်အချိန်ကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအကြောင်းကိုအရေးပါသောအမှန်တရားသက်သေ, မျှမျှတတစဉ်ဆက်မပြတ်ရှိနေဆဲ; အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းတဲ့ထပ်တလဲလဲတာဝန်မဟုတ်ပါဘူး။ သူကတောင်မိမိအလိင်စိတ်ခံယူမှုနဲ့နှငျ့ပတျသကျမဟုတ်အကြောင်းအရာကြည့်ရှုရန်အသုံးပြုသူဦးဆောင်ပိုပြီးတုန်လှုပ်ဖွယ်အကြောင်းအရာဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြရန်အသုံးပြုသူရဲ့အရသာပြောင်းလဲ, လုနီးပါးန့်အသတ်မိတ်ဖက်များအတွက်ပေးပါသည်။ အင်တာနက်ကညစ်ညမ်း၏အသုံးပြုမှုကိုစဉ်ဆက်မပြတ်မဟုတျပါဘူး, ဒါပေမယ့်တဖြည်းဖြည်းခက်အကြောင်းအရာကိုကြည့်ရှုရန်အသုံးပြုသူဦးဆောင်မဟုတ်ဘဲတစ်ဦးဖြစ်ပေါ်နေသောလုပ်ငန်းစဉ်သည်။
porn ၏လူမှုရေးဆိုလိုမျိုးဆက်ကျောင်းသားများ Y ကို၏ defining အချက်ကိုအထောက်အကူပြုရန်, ကျွန်တော်ဖန်သားပြင်နှင့်အတူစစ်မှန်သော interaction ကအစားထိုးဖို့, ဒါပေမယ့်လည်းလူမှုရေးအရလက်ခံနိုင်ဖွယ်အပြုအမူကြောင့်သတ်မှတ်မှသာကျွန်တော်တို့ရဲ့မသိစိတ်တစ်ပိုင်းမစ်ရှင်စေပြီ။ မျိုးဆက် Y ကို၏လေးငါးအဖွဲ့ဝင်အုပ်စုတစ်စုအတူတူ socializing နှင့်နှစ်ဦးသို့မဟုတ်သူတို့ထဲကသုံးယောက်စကားပြောဆိုမှုကြီးစိုးခြယ်လှယ်နေကြသည်လျှင်စတုတ္ထသို့မဟုတ်ပဉ္စမလူတစ်ဦးကသူ့စမတ်ဖုန်းကိုထုတ်ယူဘို့ဥပမာ, မသာရိုင်းစိုင်းပေမယ့်လုံးဝလူမှုရေးအရလက်ခံနိုင်ဖွယ်မဟုတ်ပါဘူး နှင့်စာပို့ဒါမှမဟုတ် Facebook ကို Newsfeed ကိုလှန်လှောကြည့်စတင်ပါ။ အဲဒီအစား, လက်မှာစကားလက်ဆုံသို့လူမှုရေးဆက်စပ်မှုစုဆောင်း၏ပိုမိုလွယ်ကူနည်းလမ်းမှမျိုးဆက်ကျောင်းသားများ Y ကို default အနေနဲ့၏အင်္ဂါအများရှိဆွဲလဲဖို့ကြိုးစားနေ၏။ အင်တာနက်ကညစ်ညမ်း၏မြင့်တက်အလားတူလူမှုရေးသက်ရောက်မှုဖန်တီးထားသည်။ (တစ်ဦးဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ရှုထောင့်ကနေ) တစ်ခုစံပြကမ်ဘာပျေါတှငျ, တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေမတည်ရှိလိမ့်မယ်။ မရှိအချက်တစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်လူသား၏တိုးဖို့အထောက်အကူပြုမထားဘူး။ အဘယ်ကြောင့်လွှတ်ပေးအမျိုးအနွယ်ကိုတစ်နေရာရာကမျိုးအောင်မည်မဟုတ်လော အင်တာနက်က porn နှင့်အတူ Masturbating ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်သို့မဟုတ်ပြဋ္ဌာန်းလိုက်စားမလိုအပ်ပါဘူး, ဒါကြောင့်စောင့်ဆိုင်းအဲဒီမှာအမြဲဖြစ်တယ်, အစဉ်အမြဲရှိလိမ့်မည်။ ဒါဟာငယ်ရွယ်အထီးအစားအမှန်တကယ်မိန်းကလေးများအတွက်သွား၏အပေါ်အကြီးအကျယ်မှီခိုအားထားတဲ့မယုံနိုင်စရာ fallback ဖြစ်ပါတယ်။ မကြာခဏအင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုလူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်မျိုးပွားကျွန်တော်တို့ရဲ့ပန်းတိုင်အညီဆောင်ရွက်ရန်နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းဖြစ်စေခဲ့သည်။
အသက်အရွယ် 18 အသုံးပြုပုံ masturbated ကြသူမျိုးဆက်ကျောင်းသားများ Y ကို၏အထီးအဖွဲ့ဝင်အရေအတွက်ကို 99 ရာခိုင်နှုန်းကိုချဉ်းကပ်။ အတော်များများတွင်အင်တာနက်ညစ်ညမ်း၏လက်ထောက်နှင့်အတူတစ်ခုတည်းကိုသာနေ့စဉ်သို့မဟုတ် Multi-နေ့စဉ်အခြေခံပေါ်မှာ masturbate ။ ဂယ်ရီ Wilson ကမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့လူတိုင်းအသုံးပြုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကြောင့်မျိုးဆက် Y ကိုအတွက်အထီးကိုဖြတ်ပြီးတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေနှင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းဖို့နီးပါးပြည့်စုံတင်သွင်းခဲ့တဲ့ဖို့, အင်တာနက်ညစ်ညမ်းများ၏သက်ရောက်မှုကိုစမ်းသပ်မရနိုင်သောဂရိတ် Porn စမ်းသပ်မှုစကားပြောရန်သည်သူ၏ TEDx အတွက်စောဒကတက်သည်။ ရိုးရှင်းစွာအတစ် porn-အခမဲ့ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုတစ်စုမတည်ရှိပါဘူး။ ဤဆင်ခြေများကြောင့်လေ့လာမှုအတွက်စမ်းသပ်ပြီးအကြိမ်ရေများမရှိခြင်းအတန်ငယ်ချို့ယွင်းချက်, သို့သော်တဦးတည်းနှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုရင်ကွင်းစစ်မှန်တဲ့: မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ Y ကိုအပေါငျးတို့သအထီးအဖွဲ့ဝင်များကအသက်အရွယ် 12 မှာစတင်တစ်နေ့လျှင်စီးကရက်တစ်ဗူးသောက်သည်လျှင်မူကား, အဆုတ်ကင်ဆာတစ်ဦးရောဂါလက္ခဏာတွေကိုပုံမှန်ထည့်သွင်းစဉ်းစားလိမ့်မယ်လို့ ။ အထီးမျိုးဆက်ကျောင်းသားများ Y ကိုအဖွဲ့ဝင်တစ်ဝှမ်းတွင်အင်တာနက်ညစ်ညမ်း၏နေရာအနှံ့သုံးတစ်ခုမှာဖြေရှင်းချက် porn နှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေမှုပုံစံအားလုံးကိုကနေယာယီ abstinence ဖြစ်ပါတယ်။
အထူးသ, porn နှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ၏ abstinence ဖို့တစ်ခုတည်းကိုသာဆက်ကပ်အပ်နှံ Reddit.com ၏အပိုင်းတစ်ခုအပေါ်အသုံးပြုသူများတသမတ်တည်းထိုကဲ့သို့သောအိပ်မပျော်, အာရုံ၏မရှိခြင်းနှင့်စိတ်ကျရောဂါအဖြစ်, ဆုတ်ခွာ၏ရောဂါလက္ခဏာများ post ။ အဆိုပါရည်မှန်းချက် 90 နေ့ရက်ကာလအဘို့တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းအခမဲ့သွားနှင့်မီနှင့်ရလဒ်များကိုပြီးနောက်အစီရင်ခံတင်ပြရန်ဖြစ်ပါသည်။ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောပိုင်းတွင်အနုတ်လက္ခဏာရောဂါလက္ခဏာတွေပြီးနောက်သုံးစွဲသူများကအစီရင်ခံစာ Self-လေးစားမှု, ယုံကြည်မှု, လိင် drive ကိုနှင့်လိင်အရာဝတ္ထုအဖြစ်ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်မသာအဖွဲ့ဝင်များတန်ဖိုးထားနိုင်စွမ်းတိုးမြှင်။ တကယ်တော့, အမျိုးသားများအတွက်သုက်နှင့် Serum testosterone အဆင့်အကြားဆက်ဆံရေးအပေါ်တစ်ဦးကသုတေသနခေါင်းစဉ်လေ့လာမှုတစ်ခုပင်သုတ်ရည်လွှတ်ခြင်းမရှိဘဲသတ္တမနေ့၌ပြီးနောက် testosterone ဟော်မုန်းသွေးရည်ကြည်အဆင့်ဆင့်အတွက်အနီး 50% မြင့်တက်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အင်တာနက်က porn နှင့်အတူ masturbating မှလိင်နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာသုတ်ရည်လွှတ်ခြင်းမရှိဘဲတစ်ပါတ်အကြာတွင် testosterone ဟော်မုန်းသွေးရည်ကြည်အဆင့်ဆင့်အတွက်ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်ကွဲပြားခြားနားသည်။ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ, မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ Y ကိုအတွက်ယောက်ျားတဖြည်းဖြည်းတူကနဦးအကျိုးသက်ရောက်အောင်မြင်ရန်ပိုမိုထိတ်လန်နှင့်ဂရပ်ဖစ်အကြောင်းအရာလိုအပ်ဒီနေ့ရဲ့ပစ္စည်းအပေါ်ထမြောက်တော်မူ။ အမှန်တကယ်လိင်သမျှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုမှအခြားဘက်အလိုဆန္ဒများကိုသဘောတူဖို့နှစ်ဖက်စလုံးနှငျ့ပတျသကျသော, တစ်ဦးထက်ပိုလူတစ်ဦးလိုအပ်သည်။ တစ်ဦးတည်း masturbating တစ်စုံတစ်ဦးကသာမိမိကိုမိမိ၏သဘောတူခွင့်ပြုချက်လိုအပ်သည်သောကြောင့်, ခက်ခဲအကြောင်းအရာပေါ်ရွှေ့ဖို့ propensity အများကြီးပိုမိုမြင့်မားသည်။
အာဏာပိုင်ကိန်းဂဏန်းများ, အထူးသဖြင့်အများအပြားဘာသာရေးထူထောင်မှု, အစဉ်မပြတ်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းနှင့်အိမ်မထောင်မီလိင်နှစ်မျိုးလုံးကနေပြီးပြည့်စုံသော abstinence ရာထူးတိုးပါပြီ။ မျိုးဆက် Y ကို၏သံသယအထီးအခွင့်အာဏာကိန်းဂဏန်းများနှစ်ပေါင်း abstinence တရားကိုဟောပြောဘူးစဉ်းစားတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေဖြတ်မေးခွန်းထုတ်လိမ့်မည်။ တစ်ခုမှာ "ငါတို့သည်အဘယ်ကြောင့်သင်ဤအချိန်ယုံကြည်သင့်သလဲ" ဟုပြောစေခြင်းငှါ
အဆိုပါခြားနားချက်အကြောင်းပြချက်များ၏အရင်းအမြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ဒီလှုပ်ရှားမှုကိုတစ်ဦးရွယ်တူ-oriented လှုပ်ရှားမှုအဖြစ်စတင်ခဲ့ပါတယ်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, Big Brother ကုလားကာနောက်ကွယ်ကလူကိုမဟုတ်ဘူး။ အဆိုပါစမ်းသပ်မှုဘာသာရပ်များဖြစ်ကြသည်။ အင်တာနက်က porn နှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ၏ပေါင်းစပ်ခြင်းမှရှောင်ငယ်ရွယ်အထီးဆန္ဒအလျောက်မွေးစားခြင်းနှင့်တသမတ်တည်းအပြုသဘောသက်ရောက်မှုအစီရင်ခံကြတဲ့ရွယ်တူမှုတ်သွင်းပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခုတည်းကိုသာ porn နှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေဖြတ်, သို့သော်, ဖြေရှင်းချက်မဟုတ်ပါ။ ဒါဟာနောက်ဆုံးရည်မှန်းချက်အောင်မြင်အောင်အတွက်မျှသာတစ်ဦးခြေလှမ်းကျောက်ဖြစ်ပါတယ်။
porn နှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းမှ abstinence ၏ရည်မှန်းချက်ဦးနှောက်ရဲ့ဆုလာဘ် circuitry rewire နှင့် screen ပေါ်မှာအစစ်အမှန်လူ့ interaction ကအစား pixels ကိုမျက်နှာသာရန်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါရည်မှန်းချက်ကွန်ပျူတာဆုတ်ခွာမယ့်အစားအခွင့်အလမ်းကိုယူပြီးနှင့်သူမ၏ထွက်တောင်းဆိုနေတာ၏အပြုအမူကိုရပ်တန့်ဖို့ပါပဲ။ မျိုးပွား: အဆိုပါရည်မှန်းချက်ကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့ဖယ်ရှားသူတွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စနစ်များကနေအမူအကျင့်များနှင့်ပင်ကိုစရိုက်ကလုပ်ပေးရန်ရည်ရွယ်ခဲ့ကြသည်သောအရာကိုလူ့ရဲ့အကိုပြန်လည်အသက်သွင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
ကျမ်းကိုးစာရင်း (MLA စတိုင်):
Fiorino, Dennis F. , Ariane Coury နှင့် Anthony G. Phillips တို့ဖြစ်သည်။ "အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ " Nucleus ပြောင်းလဲခြင်းသည်ယောက်ျားကြွက်များတွင် Coolidge သက်ရောက်မှုအတွင်း Dopamine Efflux accumbens NP၊ ကြိမ်မြောက်ဝက်ဘ် 19 ဇန်နဝါရီ 2013 ။
မဟာ Porn စမ်းသပ်မှု: TEDxGlasgow မှာဂယ်ရီ Wilson က။ စွမ်းဆောင်ရည်။ ဂယ်ရီ Wilson က။ YouTube ကို။ TEDxGlasgow, 16 မေလ 2012 ။ Web ကို။ 19 ဇန်နဝါရီလ 2013 ။
Jiang, Ming, Xin Jiang, Qiang Zou နှင့် Jin-wen Shen ။ ငါ၌သုက်လွှတ်မှုနှင့်သွေးရည်ကြည် Testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်အကြားဆက်နွယ်မှုဆိုင်ရာသုတေသန။ Zhejiang Univ ၏ဂျာနယ်။ သိပ္ပံ, မတ်လ 2003 ဝက်ဘ်။ 22 ဇန်နဝါရီ 2013 ။ ။